FANAVOTANA NY FIRENENA : Nidera ny fandrasain’andraikitra nataon’ny FLM, ny Cram
Mahatsiaro ho manana adidy sy andraikitra amin’ny fanarenana ny firenena ireo raiamandreny ara-panahy. 13 mars 2018
Ankoatra ny andraikitra sahanin’ny FLM miaraka amin’ny mpikambana eo anivon’ny FFKM dia nananatra manokana ireo zanany koa ny raiamandreny avy amin’ny fiangonana FLM, izay niantsoany ireo zanaky ny fiangonana rehetra toy ny mpanao politika, olom-boafidy, ireo efa niala tamin’ny sezany na ireo mbola mikasa ny ho eo amin’ny fitondrana.
Ny faran’ny herinandro lasa teo no nanatanterahana an’io fihaonana io tetsy amin’ny foiben-toeran’ny FLM etsy 67ha izay notarihin’ny filohany, ny pastora Rakotonirina David. Nidera manokana an’io fihetsika io ny fikambanana Faribolana mandinika ny ho avin’ny firenena na ny Cram. Nambaran’ny sekretera jeneralin’ny Cram tamin’izany fa manana finiavana tanteraka amin’ny fanavotana ny firenena ireo raiamandreny ara-panahy.
“ Nandritra ny atrik’asa politika natao tao amin’ny Fiangonana Loterana 67 ha tamin’ny sabotsy lasa teo no nahatsapana tamin’ny alalan’ireo olona rehetra nitondra famelabelarana fa miezaka manolotra vahaolana ny zanaky ny fiangonana mba hisorohana ny krizy izay mety hitranga eto Madagasikara sy hialana amin’izao fahalovana misy eto amin’ny firenena izao”, hoy ny fanambaràna navoakan’izy ireo omaly.
Tsiahivina hatrany fa efa nitondra ny anjara birikiny niaraka tamin’ireo raiamandrenim-piangonana eo anivon’ny FFKM, izay nilaza fa hiroso amin’ny fitarihana ny dinika fampihaonana ny zanak’Andriamanitra ho amin’ny fampihavanam-pirenena sy ny famoahana amin’ny krizy ity raiamandreny ity.